Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်)
Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Imipenem + Cilastatinကို ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်း မျိုးစုံကို ကုသရန်အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ carbapenem အမျိုးအစား ပဋိဇီဝဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားပေါက်ပွားမှုကို တားဆီးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။
Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဒီဆေးဟာ ကြွက်သားထဲ (သို့) သွေးပြန်ကြောထဲ ထိုးရတဲ့ဆေးဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် ၆-၈နာရီမှာတကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း ထိုးရပါတယ်။
ဆေးပမာဏဟာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်ခြင်းအပေါ် မူတည်ပါတယ်။
အိမ်မှာပဲ ကိုယ့်ဖာသာထိုးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပြင်ဆင် သုံးစွဲရတယ်ဆိုတာ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေဆီမှာ မေးမြန်းထားပါ။ မသုံးစွဲခင်မှာ ဆေးထဲမှာ အနည်အမှုန်များပါနေခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ အနည်ပါနေရင်၊ အရောင်ပြောင်းနေရင် မသုံးပါနဲ့။ ဆေးဝါးတွေကို ဘေးကင်းစိတ်ချရအောင် ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမယ်ဆိုတာ၊ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာ လေ့လာထားပါ။
အာနိသင်အကောင်းဆုံးရအောင်အချိန်မှန်သုံးစွဲပါ။ မှတ်မိလွယ်အောင် နေ့စဉ် အချိန်တူညီစွာ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးကို ထိုးပြီး ရက်အနည်းငယ်နဲ့ ရောဂါသက်သာသွားရင်တောင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်း ပြည့်ဝအောင် သုံးစွဲပေးပါ။ ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကို စောစီးစွာရပ်တန့်ခြင်းဟာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ထပ်မံဖြစ်ပွားစေတတ်ပါတယ်။
Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ဆေးမှုန့်များကို ၂၀ ကနေ ၂၅ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၆၈-၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) မှာ သိမ်းဆည်းထားသိုသင့်ပါတယ်။
အိမ်မှာပဲသိမ်းဆည်းထားဖို့ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်စသူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Imipenem + Cilastatinမသုံးစွဲခင်မှာ သူနဲ့ဓါတ်မတည့်တာရှိရင်၊ penicillins (သို့) cephalosporinsနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေရှိရင်၊ တခြားဓါတ်မတည့်တာရှိရင် ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ဖွင့်ပြောပါ။ ဒီပစ္စည်းမှာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းနဲ့ တခြားပြသနာတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုသိရအောင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
ဆေးမသုံးခင်မှာ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကို (အထူးသဖြင့် ဦးနှောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အတက်ရောဂါ၊ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာ၊ ဦးနှောက်အကျိတ်၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါ စတာတွေရှိရင်)ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကို ဖွင့်ပြောပါ။ ဒီဆေးဟာ တိုက်ဖွိုက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးလိုမျိုး သက်ရှိဘက်တီးရီးယားအသုံးပြု ကာကွယ်ဆေးတွေကို အာနိသင်လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒီဆေးသုံးစွဲနေချိန်မှာ ဆရာဝန်မညွှန်ဘဲ ကာကွယ်ဆေးထိုး/သောက်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနဲ့။ အသက်ကြီးလာရင် ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်း ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးကို ကျောက်ကပ်ကနေ ဖယ်ထုတ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးသူတွေဟာ ဒီဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ပိုပြီးကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီဆေးဟာ မိခင်နို့ထဲကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကိုထိခိုက်မှုဖြစ်စေတဲ့ အထောက်အထား မတွေ့ရပေမယ့် ဆေးသုံးနေချိန် မိခင်နို့တိုက်ရတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Imipenem + Cilastatinကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ အသုံးပြုရင် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာ စမ်းသပ်ချက်တွေ မရှိပါဘူး။ ဆေးမသောက်သုံးခင်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ကောင်းကျိုးများနဲ့ ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Imipenem + Cilastatinဆေးဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များမှာ ထိခိုက်နိုင်ခြေအဆင့် C ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။)အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များမှာ ထိခိုက်နိုင်ခြေ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ ရောင်ရမ်းနီရဲခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ အနာဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်းတွေ ဖြစ်တာတော့ ရှားပါတယ်။
အဲဒီလက္ခဏာတွေ ပျောက်မသွားရင်၊ ပိုဆိုးသွားရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
ဆရာဝန်အနေနဲ့ ဒီဆေးကို ပေးရခြင်းဟာ ဆိုးကျိုးထက် ကောင်းကျိုးက ပိုများတယ်လို့ ယူဆလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးသုံးစွဲသူအများစုမှာတော့ ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မကြုံရပါဘူး။ ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ဆီးအရောင်မည်းခြင်း၊ သွေးခြေဥလွယ် သွေးထွက်လွယ်ခြင်း၊ အကြားအာရုံပြောင်းလဲခြင်း (နားလေးခြင်း၊ နားအူခြင်း)၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲခြင်း (စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အာရုံခြောက်ခြားခြင်း)၊ ဆက်တိုက် လည်ချောင်းနာခြင်း ဖျားခြင်း၊ ခြေလက်များကျင်ခြင်း၊ မျက်စိအသားဝါခြင်း၊ ကြွက်သားများ အကြောလိုက်ခြင်း စတာတွေဖြစ်ရင် ဆရာဝန်ပြသပါ။
ရှားပါးပေမယ့် ပြင်းထန်တတ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့ တက်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အားနည်းခြင်း စတာတွေဖြစ်ရင် ဆေးဝါးကုသမှုချက်ချင်း ခံယူပါ။
ဒီဆေးဝါးဟာ ဆိုးရွားတဲ့ Clostridium difficile နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဝမ်းပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကုသနေစဉ်မှာ (သို့) ဆေးကိုရပ်လိုက်ပြီး အပတ်ပေါင်းလပေါင်းကြာလာတဲ့အခါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆက်တိုက်ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းထဲ သွေး အမြှုပ်ပါခြင်း စတာတွေဖြစ်ချိန်မှာ ဝမ်းပျက်ပျောက်ဆေး၊ မူးယစ်ဆေးပါတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ မသုံးစွဲပါနဲ့။ ပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ပဲ ပြသပါ။
ဒီဆေးကို အချိန်ကြာကြာသုံးခြင်း၊ ထပ်တလဲလဲသုံးခြင်း စတာတွေကြောင့် ပါးစပ်မှာမှက္ခရုပေါက်ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ် ပိုးဝင်ခြင်း စတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာ အဖြူဖတ်တွေတွေ့ရင်၊ မိန်းမကိုယ်ကနေ အဖြူဆင်းရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဒီဆေးနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိတဲ့ ဆေးတွေကတော့ ganciclovir, အခြားပဋိဇီဝဆေးများ, divalproate/valproic acid စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဋိဇီဝဆေးအများစုဟာ ဟော်မုန်းအသုံးပြုတဲ့ သန္ဓေတားဆေးတွေကို မထိခိုက်နိုင်ပေမယ့် အချို့ကတော့ တားဆေးတေါရဲ့ အာနိသင်ကို ကျဆင်းစေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းပါတဲ့ သန္ဓေတားဆေး အသုံးပြုနေရင် ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ဖွင့်ပြောပါ။
ဒီဆေးဟာ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်အချို့ (ဥပမာ ဆီးမှတဆင့် ဆီးချီုစစ်ခြင်း)ကို အဖြေမှားစေတတ်ပါတယ်။ ဒီဆေးသုံးနေရတယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းများကို ဖွင့်ပြောပါ။
Imipenem + Cilastatinဟာ သင်ယခု သောက်သုံးနေတဲ့ တခြားဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်း လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် (သို့်) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Imipenem + Cilastatinဟာ အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိ မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Imipenem + Cilastatin ဟာ သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လူကြီးများ အစာလမ်းကြောင်းမှ အရာတမျိုးမျိုးကို အဆုတ်ထဲရှူသွင်းမိရာမှ အဆုတ်ရောင်ခြင်း
သွေးပြန်ကြောမှတဆင့် ၂၅၀မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီကြာတိုင်း (သို့) ၅၀၀မီလီဂရမ်ကနေ ၁ဂရမ်ကို ၆-၈နာရီကြာတိုင်း ရောဂါပိုးဝင်တဲ့အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ထိုးပေးရပါတယ်။
အများဆုံးပမာဏကတော့ တရက်မှာ ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုမှာ ၅၀မီလီဂရမ် (သို့) တရက်ကို ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကုသမှုပမာဏအနေနဲ့ လူနာအခြေအနေကောင်းမွန်ပြီး အဖျားကျတဲ့အထိ ထိုးပေးရပါတယ်။ ပဋိဇီဝသောက်ဆေးများနဲ့ပါ ပေါင်းစပ်အသုံးပြု ရတတ်ပါတယ်။ လေမလိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုး အဆုတ်လမ်းကြောင်းမှာ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ကုသရာမှာ ပိုးဝင်ရောက်ခြင်းရှင်းလင်းသွားတဲ့အထိ၊ အနာရွတ်လေးတွေ ကျန်ခဲ့တဲ့အထိ ဆက်လက်ကုသပေးရပါတယ်။ တခါတရံ ၂လကနေ ၄လအထိ ကြာတတ်ပါတယ်။
သွေးပြန်ကြောမှတဆင့် ၅၀၀မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီကြာတိုင်း (သို့) ၁ဂရမ်ကို ၆-၈နာရီကြာတိုင်း ရောဂါပိုးဝင်တဲ့အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ထိုးပေးရပါတယ်။
ကုသမှုပမာဏအနေနဲ့ ၁၄ရက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါအခြေအနေပေါ် မူတည်ပါတယ်။
သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းအတွက် ၅၀၀-၇၅၀ မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း ကြွက်သားထဲ ထိုးရပါတယ်။ ရောဂါအခြေအနေပေါ် မူတည်ပါတယ်။
အများဆုံး တနေ့ကို ၁၅၀၀ မီလီဂရမ် ပေးပါတယ်။
ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ၃-၄ပတ် ကြာတတ်ပါတယ်။
ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ၁၄ရက်ခန့် ပေးရတတ်ပါတယ်။
လူကြီးများ ဖျားပြီး သွေးဖြူဥနည်းခြင်း
ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ပိုးအမျိုးအစားကို အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ရင် သွေးပြန်ကြောမှတဆင့် ၅၀၀မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီကြာတိုင်း (သို့) သင့်တင့်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ရင် ၁ဂရမ်ကို ၈နာရီကြာတိုင်း (သို့) Pseudomonas aeruginosa ပိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ယူဆရင် ၁ဂရမ်ကို ၆နာရီကြာတိုင်း ထိုးပေးရပါတယ်။
လူနာအခြေအနေတည်ငြိမ်လာပြီး အနည်းဆုံး ၂၄နာရီလောက် အဖျားကျသွားရင်၊ သွေးဖြူဥဟာ အနည်းဆုံး 500 cells/mm3 ရှိရင် ရောဂါပိုးပေါ်မူတည်ပြီး သောက်ဆေးကို စတင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ကုသမှုကာလဟာ ရောဂါအခြေအနေပေါ် မူတည်ပါတယ်။
ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ၇ရက်ကနေ ၁၄ရက် ကြာတတ်ပါတယ်။
ခြေတုလက်တုနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ပိုးဝင်ခြင်းမှာ ၆ပတ်ထက်ပိုကြာတဲ့ ရေရှည်ကုသမှု လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ၁၄ရက်ခန့် ကြာတတ်ပါတယ်။
Listeria ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်းမှာ ၃ပတ်ကနေ ၆ပတ်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။
လူကြီးများ ဆေးရုံတက်စဉ် အဆုတ်ရောင်ခြင်း
ဆေးရုံမှာ ဆေးပေါင်းစုံကိုယဉ်ပါးနေတဲ့ ရောဂါပိုးလို့ သံသယရှိရင် ကနဦးကုသမှုအနေနဲ့ ရောဂါပိုးပေါင်းစုံကို ခြုံငုံမိစေတဲ့ ကုသမှုကိုပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Pseudomonas aeruginosa ရောဂါပိုးကြောင့် မဟုတ်ရင် ကုသမှုဟာ တတ်နိုင်သမျှ (၇ရက်ခန့်) တိုတောင်းရပါတယ်။ ဆေးယဉ်ပါးတဲ့ နောက်ထပ်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ၄ပတ်ကနေ ၆ပတ် ကြာတတ်ပါတယ်။
နာတာရှည် အရိုးရောင်ရမ်းခြင်းမှာ သောက်ဆေးကိုပါ ၆လအထိ ဆက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မကောင်းတော့တဲ့ အရိုးတွေကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားရပါတယ်။
လူကြီးများ ဝမ်းဗိုက်အမြှေးပါး ရောင်ရမ်းခြင်း
ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ၁၀ရက်ကနေ ၁၄ရက် ကြာတတ်ပါတယ်။
Pneumococcal ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ခြင်းဆိုရင် ၇ရက်ကြာပြီး တခြားရောဂါပိုးတွေဆိုရင်ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ၂၁ရက် ကြာတတ်ပါတယ်။
ရောဂါအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ၁၄ရက် ကြာတတ်ပါတယ်။
၇ရက်ကနေ ၁၀ရက် ဒါမှမဟုတ် အရောင်ကျပြီး ၃ရက်အထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ ရောဂါအခြေအနေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ပိုပြီး ဆိုးရွားတဲ့ ဆီးချိုကြောင့် တစ်သျှူးရောင်ခြင်းတွေမှာ ၁၄ရက်ကနေ ၂၁ရက်အထိ ကုသရတတ်ပါတယ်။
သွေးပြန်ကြောမှတဆင့် ၂၅၀မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီကြာတိုင်း(သို့) ၅၀၀မီလီဂရမ်ကနေ ၁ဂရမ်ကို ၆-၈နာရီကြာတိုင်း ရောဂါပိုးဝင်တဲ့အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ထိုးပေးရပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲပြသနာမရှိရင် သွေးပြန်ကြောမှတဆင့် ၂၅၀မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီကြာတိုင်း၊ နောက်ဆက်တွဲပြသနာရှိရင်၅၀၀မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီကြာတိုင်း ထိုးပေးရပါတယ်။
ရောဂါအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ၃ရက်ကနေ ၇ရက် ကြာတတ်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်အတွက် ဆေးပမာဏ ချိန်ညှိခြင်း
ကျောက်ကပ်မှာ ခရီအက်တနင်းစွန့်ထုတ်မှုဟာ တမိနစ်မှာ ၄၁ မှ ၇၀ မီလိလီတာရှိရင်၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၇၀ကီလိုဂရမ်အထက်ရှိရင်
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၁ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၈နာရီကြာတိုင်း ၂၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၁.၅ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၆နာရီကြာတိုင်း ၂၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၂ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၈နာရီကြာတိုင်း ၅၀၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၃ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၆နာရီကြာတိုင်း ၅၀၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၈နာရီကြာတိုင်း ၇၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၁ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၆နာရီကြာတိုင်း ၁၂၅ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၁.၅ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၈နာရီကြာတိုင်း ၂၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၂ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၆နာရီကြာတိုင်း ၂၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၃ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၈နာရီကြာတိုင်း ၅၀၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ကျောက်ကပ်မှာ ခရီအက်တနင်းစွန့်ထုတ်မှုဟာ တမိနစ်မှာ ၂၁ မှ ၄၀ မီလီလီတာရှိရင်၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၇၀ကီလိုဂရမ်အထက်ရှိရင်
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၁ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၂၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၆နာရီကြာတိုင်း ၅၀၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ကျောက်ကပ်မှာ ခရီအက်တနင်းစွန့်ထုတ်မှုဟာ တမိနစ်မှာ ၆ မှ ၂၀ မီလီလီတာရှိသူများ။ ရောဂါပိုးအများစုအတွက် ၁၂၅မှ ၂၅၀မီလီဂရမ်ကို သွေးကြောမှတဆင့် ၁၂နာရီကြာတိုင်း ပေးပါတယ်။ ဆေးပမာဏကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၅၀၀ မီလီဂရမ် သွေးကြောမှဆင့်ပေးတဲ့အခါ အတက်ရောဂါဖြစ်နိုငခြေ များပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၁.၅ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၂၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၂ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၂၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၃ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၅၀၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၅၀၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၁ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၁၂၅ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ကျောက်ကပ်မှာ ခရီအက်တနင်းစွန့်ထုတ်မှုဟာ တမိနစ်မှာ ၅ မီလီလီတာနဲ့ အောက်လျော့နည်းသူများမှာ ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်းကို ၄၈နာရီအတွင်း မလုပ်ဖြစ်ရင် imipenem-cilastatin ကို မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။ ကလေးတွေမှာ ၃၀ကီလိုထက်နည်းပြီး ကျောက်ကပ်မကောင်းရင် သွေးပြန်ကြောကနေ imipenem-cilastatin ပေးခြင်းကို ထောက်ခံမှုမပြုထားပါဘူး။
ကျောက်ကပ်ကနေ ခရီအက်တနင်းစွန့်ထုတ်မှုဟာ တမိနစ်မှာ ၂၀ မီလီလီတာအောက်နည်းတဲ့ လူနာများမှာ imipenem-cilastatin ကို ကြွက်သားထဲထိုးခြင်းအတွက် ဘေးကင်းစိတ်ချရမှုရှိကြောင်း အာမမခံပါဘူး။
လူနာများရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၇၀ကီလိုအောက် လျော့နည်းရင်၊ ကျောက်ကပ်ကနေ ခရီအက်တနင်းစွန့်ထုတ်မှုဟာ တမိနစ်မှာ ၇၁ မီလီလီတာနဲ့အထက်ရှိရင်
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၃ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၈နာရီကြာတိုင်း ၇၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၈နာရီကြာတိုင်း ၁ဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၆နာရီကြာတိုင်း ၅၀၀မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၁ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၈နာရီကြာတိုင်း ၁၂၅ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၁.၅ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၆နာရီကြာတိုင်း ၁၂၅ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၂ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၈နာရီကြာတိုင်း ၂၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၃ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၆နာရီကြာတိုင်း ၂၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၈နာရီကြာတိုင်း ၅၀၀မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ကျောက်ကပ်မှာ ခရီအက်တနင်းစွန့်ထုတ်မှုဟာ တမိနစ်မှာ ၅ မီလီလီတာနဲ့ အောက်လျော့နည်းသူများမှာ ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်းကို ၄၈နာရီအတွင်း မလုပ်ဖြစ်ရင် imipenem-cilastatinကို မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
ခရီအက်တနင်းစွန့်ထုတ်မှုဟာ တမိနစ်မှာ ၅ မီလီလီတာနဲ့ အောက်လျော့နည်းတဲ့ ကျောက်ကပ်ဆေးသူများဟာ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၁၂၅ ကနေ ၂၅၀ မီလီဂရမ်ကို အကြောဆေးအနေနဲ့ သုံးစွဲရပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၅၀၀ မီလီဂရမ်ကို အကြောဆေးအနေနဲ့ပေးခြင်းဟာ အတက်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၅၀၀မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၃ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၂၅၀ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၁.၅ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၁၂၅ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၂၅၀မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
ပုံမှန်ပေးရမယ့် ပမာဏဟာ တရက်ကို ၂ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂နာရီကြာတိုင်း ၁၂၅ မီလီဂရမ် လျှော့ချရပါတယ်။
imipenem နဲ့ cilastatin နှစ်မျိုးစလုံးဟာ ကျောက်ကပ်ဆေးချိန်မှာ သွေးထဲကနေ ဖယ်ထုတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ဆေးပြီးချိန်နဲ့ ၁၂နာရီကြာတိုင်းမှာ ဆေးကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့ လူနာတွေမှာ ကောင်းကျိုးက ဆိုးကျိုးထက် ပိုများမှသာ ဒီဆေးကိုပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းသွေးသန့်စင်ခြင်း။ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဆေးပမာဏကို အတည်ပြုထားခြင်း မရှိပါဘူး။
ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသခြင်း။ ကျောက်ကပ်ကနေ စွန့်ထုတ်နှုန်းဟာ သိသိသာသာမြင့်တက်လာတာကြောင့် တဦးချင်းစီရဲ့ အခြေအနေအလိုက် ဆေးပမာဏချိန်ညှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သုတေသနတချို့မှာတော့ ၅၀၀ မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီတခါပေးရပါတယ်။
သွေးပြန်ကြောကနေ အများဆုံးပေးနိုင်တဲ့ ပမာဏကတော့ တရက်ကို ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ကီလိုကို ၅၀ မီလီဂရမ် ဒါမှမဟုတ် တရက်ကို ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်သားထဲပေးရင် တရက်ကို ၁.၅ဂရမ်ထက် ပိုမပေးရပါဘူး။
လူကြီးတွေအတွက် ၁၂၅-၂၅၀-၅၀၀ မီလီဂရမ် ကလေးတွေအတွက် ၅၀၀ မီလီဂရမ်နဲ့အောက်ကို မိနစ် ၂၀က နေ ၃၀နဲ့ ၁၅မိနစ်ကနေ မိနစ် ၃၀ အသီးသီး ပေးသင့်ပါတယ်။
လူကြီးတွေမှာ ၇၅၀နဲ့ ၁ဂရမ်၊ ကလေးတွေမှာ ၅၀၀ မီလီဂရမ်ကို မိနစ် ၄၀ ကနေ ၆၀ကြာအောင် ပေးသင့်ပါတယ်။ ပျို့အန်လာတဲ့ လူနာတွေမှာ ဆေးသွင်းနှုန်းကို နှေးသင့်ပါတယ်။
ကုသတဲ့အချိန်ကာလကတော့ ရောဂါရဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ကြာမြင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် imipenem-cilastatin ကို ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပျောက်သွားပြီး အနည်းဆုံး၂ရက်ထိ အသားဆေး ဆက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ၁၄ရက်ကျော် သုံးစွဲရင်တော့ ဘေးကင်းစိတ်ချရမှုရှိမရှိ မသိရပါဘူး။
ကလေးတွေအတွက် Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၇ရက်အောက် ၁၅၀၀ ဂရမ် မကျော်ရင်
၁၂နာရီကြာတိုင်း ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုမှာ ၂၀ကနေ ၂၅မီလီဂရမ် ပေးပါတယ်။
အသက်၇ရက်အောက် ၁၅၀၀ ဂရမ်နဲ့အထက်နှုန်းမှာ
၁၂နာရီကြာတိုင်း ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုကို ၂၅မီလီဂရမ် ပေးပါတယ်။
၁ပတ်ကနေ ၄ပတ်မှာ ၁၂၀၀ ဂရမ်အောက်အတွက်
၁၂နာရီကြာတိုင်း ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုမှာ ၂၅မီလီဂရမ် ပေးပါတယ်။
၁ပတ်ကနေ ၄ပတ် ၁၂၀၀ ဂရမ်နဲ့အထက်နှုန်းမှာ
၈နာရီကြာတိုင်း ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုမှာ ၂၅မီလီဂရမ် ပေးပါတယ်။
၄ပတ်ကနေ ၃လအထိ ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုမှာ ၂၅မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီကြာတိုင်း ပေးပါတယ်။
၃လနဲ့အထက် ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုမှာ ၁၅-၂၅မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီကြာတိုင်း ပေးပါတယ်။
အများဆုံးပမာဏကတော့ အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေမှာ တရက် ၂ဂရမ်ဖြစ်ပြီး သိပ်မထိန်းနိုင်ရင် ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အသားဆေးအနေနဲ့ အသက် ၁၂နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ သုံးစွဲရင် ဘေးကင်းစိတ်ချရမှုရှိမရှိ မသိရပါဘူး။
ကလေးများ အဆုတ်ရောင်ပြီး တစ်သျှူးသားများ မာခဲခြင်းအတွက်
၁၂နှစ်အထက် ကျောက်ကပ်ကောင်းတဲ့ ကလေးတွေမှာ တရက်ကို ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုကို ၉၀ မီလီဂရမ်နှုန်းနဲ့ သွေးကြောထဲ အချိန်ခွဲပြီးပေးရပါတယ်။
အများဆုံး တရက် ၄ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
Imipenem + Cilastatin (အင်မီပီနမ် + စီလတ်စ်တတ်တင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Imipenem + Cilastatin ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများ၊အချိုးအစားများနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်
Imipenem + Cilastatin ဆေးကို သုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံး သုံးစွဲပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ် သုံးစွဲရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်လွတ်သွားတဲ့ အကြိမ်ကို ကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာသာ သုံးစွဲပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသုံးစွဲခြင်း မလုပ်ပါနဲ့။
Cilastatin / Imipenem Dosage. https://www.drugs.com/dosage/cilastatin-imipenem.html. Accessed February 22, 2018.
Imipenem-Cilastatin SODIUM Vial. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-2216/imipenem-cilastatin-intravenous/details. Accessed February 22, 2018.